SekunePolo Vivo Maxx entsha engenasinqe | Isolezwe
SekunePolo Vivo Maxx entsha engenasinqe
ezezimoto / 8 June 2018, 3:08pm / INTATHELI YEZEZIMOTO
IMOTO: POLO VIVO MAXX
KUBONAKALA sengathi isazoqhubeka nokuzidlela amahlanga kubathengi iPolo Vivo njengoba sekunenye inhlobo amakhasimende angakhetha kuyo.
IVivo yaba yiyona moto encane yabagibeli i-passenger car eyadayisa kakhulu eNingizimu Afrika ngonyaka odlule njengoba kwadayiswa angaphezulu kuka-22 000.
Le moto yakhiwa embonini yakwaVolkswagen e-Uitenhage, ePort Elizabeth. Kusukela kwethulwe entsha yesizukulwane sesibili ngoFebhuwari sekudayiswe angaphezulu kuka-11 000.
IPolo Vivo Maxx entsha itholakala kuphela ingenasinqe i-hatchback.
Ihluke ngokuthi ine-suspension iphakeme ngo-15mm, amasondo anamarimu angu-17 inch, izibuko zipendwe ngombala wethusi, iqoshwe uMaxx esivalweni sebhuthi nasemaceleni, ishaya ngepayipi le-exhaust eli-sporty eligqize ng-echrome kanjalo nama-roof rails ayi-aluminium. Ngaphambili inama-fog lights.
Ngaphakathi ishaya ngama-pedal cluster a-sporty, amawindi kagesi ngaphambili, ikutshela imininingwane ngohambo lwakho, air-conditioner, isiteringi esinambhathini nomsakazo ofaka i-SD/USB/Bluetooth/App Connect onezikha eziyisithupha.
Ihamba ngenjini engu-1.6 litre enamandla angu-77kW kanti idonsa ngamagiya ayisihlanu ashintshwayo.
Kwezokuphepha iphuma nama-airbag omgibeli nomshayeli ngaphambili, ABS, EBD, Electronic Stability Control, Tyre Pressure Monitor, indawo yokufaka isihlalo sengane, i-mmobiliser, i-alamu ne-central locking.
R1.6 77kW Polo Vivo MaxxR225 000
Iphuma ne-warranty yeminyaka emithathu noma u-120 000km ne-anti-corrosion warranty yeminyaka eyisithupha. Kumele iye kwisevisi ngemuva kokuhamba u-15 000km.